ဆန်ဒရှိတိုငျး – My Blog
ဒျေါစံပါယျက အသကျ ၄၅ လောကျရှိပီ သူက အမွဲတမျး မွနျမာဝမျးဆကျ ဝတျတယျ၊ သူ့ဖငျကွီးတှကေ ကောကျခြိတျနပေီး နို့တှကေလဲ အယျနတောပဲ၊ သူနဲ့တှပေုံ့က တနေ့ ကနြျော အလုပျက အပွနျ လမျးမှာ အထုတျတှမေနိုငျမနငျးနဲ့ အနျတီတယောကျကိုတှတေ့ော့ ကနြျောလဲ ကူညီခငျြတာနဲ့ ” အနျတီ ကနြျော ကူသယျပေးရမလား ” ” အေးကှယျကြေးဇူးပါသားရယျ ” ” ဟုတျ ရပါတယျ ဒါနဲ့ အနျတီက ဘယျမှာနတောလဲ ” ” အနျတီက မုဒိတာအိမျယာမှာကှယျ့ ” ” ဟုတျလား ဒါဆို ကနြျောနဲ့အတူတူပဲပေါ့ ကနြျော က အဆောငျ (C) ၅ လှာမှာ နပေါတယျ ” ” အနျတီကလဲ အဲဒီမှာပဲ ၃ လှာမှာနတေယျ ” ” ဒါဆိုအဆငျပွတောပေါ့ ကနြျော အနျတီကို အခနျးထိ လိုကျပို့ပေးပါ့မယျ ” ” အေးကှယျကြေးဇူးပါ သားရယျ ” ဒီလိုနဲ့ စကားပွောရငျ လြှောကျလာလိုကျတာ သူနတေဲ့ အခနျးကိုရောကျလာတယျ ။ ” ကဲပါသားရယျ ရောကျလကျစနဲ့ ကျောဖီလေးဘာလေး သောကျပီးမှ ပွနျပေါ့ ” ” ဟုတျကြေးဇူးပါခငျဗြ ” ဒီလိုနဲ့ ကျောဖီသောကျရငျ စကားတှေ ပွောကွတာ။
ဒျေါစံပယျမှာ ယောကြားဆုံးသှားတာ ၈ နှဈလောကျရှိပွီဖွဈကွောငျးနဲ့ သား၂ယောကျ ရှိပွီး အမရေိက မှာ ကြောငျးတကျအလုပျလုပျပွီး အိမျထောငျကနြပေီဖွဈကွောငျး သိရတယျ၊ သူနဲ့ကနြျော ဖုနျးနံပါတျတှေ အပွနျအလှနျ ပေးပီးတော့ အကူအညီလိုရငျ ဆကျသှယျနိုငျကွောငျး ပွောပွီး ပွနျလာခဲ့တယျ၊ ကနြေျာ့ အခနျးရောကျတော့ ဒျေါစံပါယျ့ ဖငျကွီးတှကေို မှနျးပီး ဂှငျးထုလိုကျတာ လီးရတှေေ အမြားကွီးထှကျသှားတယျ ။ ဒီလိုနဲ တလလောကျကွာတော့ ကနြျောနဲ့ ဒျေါစံပယျဟာ ဖုနျးတှအေမွဲတမျးဆကျ ကွုံရငျတှကွေ့၊ သူအကူအညီလိုရငျပေးနဲ့ ရငျးနီးမှု အတျောရခဲ့ပါတယျ၊ ရငျးနှီးမှု ရလာတာနှငျ့အမြှ သူ့ကို လိုးခငျြတဲ့ စိတျကလဲ တဖှားဖှား ပျေါပေါကျလာခဲ့တယျ ။ ဒါပမေယျ့ သူရဲ့ အနအေထိုငျ သသေပျပိရိမှုကွောငျ့ သူ့ကိုလိုးရဖို့ ဘယျလိုကွံရမှနျးမသိဖွဈနတေယျ၊ ဒီလိုနဲ့ သောကွာနမှေ့ာပေါ့၊
နောကျရကျ စနတေနင်ျဂနှေ ရုံးပိတျရကျဆိုတော့ ညအမှုးသောကျပွီး နှပျမယျ ဆိုတဲ့အကွံနဲ့ သောကျနကွေ ဒနျးဖိုကျ တပွားရယျ အအေးရယျ အမွညျးရယျ ဝယျလာပွီး ပွနျလာခဲ့တယျ၊ အိမျရောကျတော့ ည ၈နာရီရှိနပေီ၊ အဲဒါနဲ့ ရေးမိုးခြိုးပွီး အရကျခှကျနဲ့ အမွညျးတှပွေငျ လပျတော့က အောကားလေးဖှငျ့ပွီး ဇရကျမငျး စညျးစိမျကို ခံစားနခေိုကျ ဖုနျးဝငျလာတယျ၊ ကွညျ့လိုကျတော့ ဒျေါစံပယျဆီက ဖုနျးဖွဈနလေို့ ကိုငျလိုကျတယျ ။ ” ဟဲလို အနျတီ .. ကနြျောအောငျအောငျပါ ဘာအကူအညီ ပေးရမလဲ ” ” အေးကှယျ မောငျအောငျအောငျ ဒီမှာလအေနျတီ့ လပျတော့ သုံးနရေငျးနဲ့ ဘာဖွဈသှားမှနျးမသိလို့ ” ” အျောဟုတျ အနျတီ ကနြျောခုလာခဲ့ပါမယျ ပွီးတော့ အနျတီအရေးကွီးရငျသုံးလို့ရအောငျ ကနြေျာ့လပျတော့လေးပါ ယူလာခဲမယျ ” ” အေးကြေးဇူးပါသားရယျ ” ကနြျောလဲ သောကျလကျစ အရကျခှကျကိုမော့ခလြိုကျပွီး လပျတော့ကို ယူကား အဝတျအစားမလဲတော့ပဲ ဘောငျဘီအတို စှတျကယျြလကျပကျြလေးနဲ့ပဲထှကျလာခဲ့တယျ။
ဒါနဲ့ အနျတီစံပယျအိမျရှရေ့ောကျတော့ တံခါးခေါကျလိုကျတယျ အနျတီလဲ တံခါးလာဖှငျ့ပေးရငျ ကနြေျာ့အောကျပိုငျးကို သခြောကွညျ့နတေယျ ။ ဟာ သှားပီ အတှငျးခံဝတျမလာတာရယျ၊ စောစောကအောကား ကွညျ့ထားတဲ့အရှိနျရယျကွောငျ့ ကနြော့လီးက ဘောငျးဘီထဲမှာ အမွှောငျးလိုကျပျေါနတေယျ၊ ကနြျောလညျး ရှကျကလဲရှကျ အားလဲနာတာနဲ့ ခါးလေးကိုငျးပီးဝငျလာခဲ့တယျ၊ အထဲရောကျတော့ ဒျေါစံပယျကို ကနြော့လပျတော့ထဲမှာ သူ့VZO အကောငျ့နဲ့ လော့အငျလုပျပေးပွီး သူ့သားတှကေို ချေါပေးလိုကျတယျ ။ ဒျေါစံပါယျ စကားပွောနတေုနျး သူ့လပျတော့ ကို ဘကျထရီဖွုတျ memory ကဒျနဲ့ ဂရပျဖဈကဒျတှကေိုဖွုတျ ခဲဖကျြနဲ့ တိုကျ အတှငျးပိုငျးကို နညျးနညျးပါးပါး သနျ့ရှငျးရေးလုပျ ပွနျတပျပီးတော့ ပါဝါဖှငျ့လိုကျတာ ကံကောငျးထောကျမစှာဖွငျ့ လပျတော့က ပှငျ့လာတယျ၊ ပီးတော့ ကနြျောလဲ ဗိုငျးရဈဆောဖျဝဲလျ ကိုဖှငျ့ပွီး ဗိုငျးရပျ စဈပေးလိုကျပါတယျ ၊ အဲဒီမှာ ဗိုငျးရဈ တှတှေတေ့ယျ၊ ကနြျောလဲ မသငျကာတာနဲ့ သူ့ history ကို ဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတော့ အားလားလား အောဝကျဆိုဒျတှေ ဖှငျ့ကွညျထားတာပဲ။
ကနြျောလဲ အသံကိုပိတျ သူကွညျ့ထားတဲ့ ဇာတျကားတှကေို ပွနျဖှငျ့ ကွညျ့လိုကျတော့ Old & Young ကောငျလေးငယျငယျလေးတှနေဲ့ အနျကွီးတှေ ဇာတျလမျးတှေ ကွညျ့ပဲ၊ နာရီဝကျလောကျကွာတော့ သူလဲပွောပီးရော ကနြျောလဲ ဗိုငျးရဈ တှသေတျပီး ။ ” ရပွီအနျတီ ဗိုငျးရပျတှေ မြားနလေို့ ဟနျးသှားတာဖွဈမယျ ထငျတယျ၊ နောကျရကျမှ ကနြျော ဆိုငျယူသှားပွီးသခြော စဈပေးပါမယျ ” ” အေးကှယျကြေးဇူးပါသားရယျ အနျတီလဲ သားတှနေဲ့ ပွောရအောငျဝယျထားတာ သိပျမသုံးတကျဖူး ” ” ဟုတျရပါတယျအနျတီ ” ” အျောဒါနဲ့ မောငျအောငျအောငျ အရကျသောကျနတောလား ” ” ဟီး … ဟုတျအနျတီ ကနြျောလဲ မနကျဖွနျအလုပျပိတျတာနဲ့ သောကျနတော ”
” အားနာလိုကျတာကှယျ သားကိုအနှောကျအယှကျပေးသလို ဖွဈနပေီ ” ” အာမဟုတျတာ ရပါတယျအနျတီရ ကနြျောလဲ ခုမှသောကျတာ တဈခှကျပဲရှိပါသေးတယျ ” ” အနျတီဆီမှာလဲ ဝိုငျပဲရှိတယျ … အဲ … ဒါဆိုဒီလိုလုပျလေ သားလကျကနျြလေး သှားယူလိုကျ အနျတီ အမွညျးလုပျပေးထားမယျ ” ” ဟုတျအနျတီ “ဆိုပွီး ကနြျောလဲ အခနျးပွနျကာ လကျကနျြ ပုလငျးကိုယူ လိုရမယျရ MaxMan တဈလုံးသောကျပီး ပွနျလာတယျ၊ ကနြျောပွနျရောကျတော့ ဒျေါစံပယျက အရကျ ခှကျရယျ အသီးပုဂံရယျ ဆကျသားခွောကျဖုတျရယျ အဆငျသငျ့ ဖွဈနပွေီ ” သားရေ ခဏထိုငျအုံးနျော အနျတီရခြေိုးလိုကျအုံးမယျ ” ” ဟုတျရပါတယျအနျတီ ” ကနြျောလဲ သူရခြေိုးနတေုနျး အရကျခှကျငှဲ့ပွီး စျောကွီးကို ဘယျလိုလိုးရမလဲအကွံထုတျ နတေယျ။
ခဏကွာတော့ ရမှေေးနံ့သငျးသငျလေးနဲ့အတူ ဒျေါစံပါယျ ထှကျလာတယျ၊ကွညျ့လိုကျတော့ ဖဲသားညဝတျ အင်ျကြီအောကျမှာ ပွူးထှကျနတေဲ့နို့ကွီး နှဈလုံးကိုတှလေို့ကျတော့ ကနြေျာ့စိတျတှေ ဘယျလိုမှကို ထိနျးလို့မရတော့ဘူး၊ ဒျေါစံပယျက ဝိုငျခှကျကို ငှဲ့ပီး ခြီးယား သားရဆေိုပီး ခှကျတိုကျခါ ကနြော့ဘေးမှာ ဝငျထိုငျပီးမော့ သောကျလိုကျတယျ ။ ” ဒါနဲ့ သားကဂငျြဆော့လား ” ” မဆော့ပါဘူး အနျတီ ဘာဖွဈလို့လဲ ” ” သားလကျမောငျးတှကေို ကွညျ့ပါအုံကွှကျသားတှနေဲ့ သားရညျးစားတှဘောတှေ ရနပေီလား ” ” မရသေးပါဘူး အနျတီ ” ” ဟုတျလို့လား ဒီလောကျတောငျ့ပွီး ဖွောငျ့တဲ့ကောငျလေးမှာ ရညျးစားမရှိတာ မယုံပါဘူး ” ” အာ … မတောငျ့ပါဘူးပါဘူး အနျတီရယျ၊ အနျတီကမှ တောငျ့တာ ”
” ဟုတျလို့လား အနျတီကအိုနပေါပီကှယျ ဘယျနရောမြား တောငျ့လို့လဲ ” ” အနျတီတဈကိုယျလုံးတောငျ့တယျ အနျတီယောကြာင်္းဆိုရငျ အရမျးကံကောငျးတာတာပဲနျော ပွီးတော့ သူက အနျတီကို သိပျခဈြမှာပဲနျော ” အဲလိုပွောလိုကျတော့ သောကျထားတဲ့ အရှိနျနဲ့ သူ့ယောကြာင်္းကို သတိရပွီး ကနြေျာ့ ပုခုံးပျေါမကျြနှာ အပျပွီး ငိုတော့တာပဲ၊ သူငိုတာအရေးမကွီဘူး ကနြေျာ့မှာ သူ့နို့ကွီးနဲ့ ထိပွီး လီးကတအားတောငျလာတယျ ၊ ကနြျောလဲ သူ့ကိုဖတျထားပီး ကွောကို သပျခါနှဈသိမျ့ပေးနမေိတယျ နဲနဲကွာလာတော့ အသံတိတျသှားပီး ကနြျောကို တငျးတငျးလေး ပွနျဖတျထားတယျ ။
” ကနြေျာ့စိတျတှေ ထိနျးလို့မရတော့ဘူးအနျတီရယျ အရမျးခဈြတယျ ပွှတျ..ပွှတျ.. ” ကနြျောလဲ ဒျေါစံပါယျနှုတျခမျးကို စုပျလိုကျတယျ၊ သူလဲ ကနြျောကို ရှနျးရှနျးစားစား ပွနျကွညျ့ပွီး ပွနျနမျးတယျ၊ အဲဒီမှာ အနျတီကို အရမျးခဈြတယျ တဖှဖှပွောရငျ ရမကျပွငျးပွငျးနဲ့ တယောကျကိုတယောကျကွညျ့ကွတယျ ကနြျောလဲ နမျးနရေငျးက ဒျေါစံပယျရဲ့နို့ကွီးတှကေို နယျရငျး အင်ျကြီတှကေို ခြှတျ၊ နှဈယောကျလုံး ကိုယျလုံးတီး ဖွဈတဲ့အခြိနျထိ အနမျးမပကျြဘူး၊ ပွီးမှဒျေါစံပယျက ” အိပျခနျးထဲ သှားရအောငျသားရယျ ” တဲ့ ၊ အိပျခနျးထဲ ရောကျတော့ ကုတငျပျေါမှာ လှဲဖတျရငျး ကနြေျာ့ပညာတှေ ပွရတော့တာပဲ ၊ ကနြျောလဲ ဒျေါစံပါယျ ပါးစပျကိုနမျး ပွီးတော့ နားတှလေညျပငျးတှေ လြှာနဲ့လကျြ နို့ကို ဘယျပွနျ ညာပွနျစို့ လကျကလဲ စောကျဖုတျကွီးကို လကျနဲ့ပှတျပေး၊ ပွီးတော့ အောကျကိုလြောခြ ခကျြနားတဝိုကျကို လြှာနဲ့မှပေီ့း စောကျဖုတျ ဆီကို ဆငျးလာတယျ ၊
အဲဒီတော့မှ ” သားရယျ ဖုနျးတှနေိမျ့ကုနျ ပါ့မယျ ” ” အာ အနျတီကလဲ မနိမျ့ပါဘူး အနျတီကို ကောငျးအောငျ လုပျပေးခငျြလို့ပါ ” ဆိုပွီး လြှာအပွားလိုကျ ယကျခလြိုကျတယျ၊ ” ရှီး….. အား ကောငျးလိုကျတာ သားရယျ ” ကနြျောလဲ လြှာကို စောကျဖုတျထဲ ဝငျနိုငျသမြှ ဝငျအောငျထိုးပွီး မှပေေးလိုကျတော့ ” အား ….ရှီး ….. လူကိုအသသေတျနတောလား သားရယျ ” ကနြျောလဲ အစိကို ပွှတျခနဲ နအေောငျ စုပျလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ ” အား….အား သားရယျလုပျပါတော့ အနျတီ … အနျတီ မနနေိုငျတော့လို့ပါသားရယျ ” ကနြျောလဲ ပေါငျကွားမှာ နရောယူပွီး လီးကိုတှပွေီ့း သှငျးလိုကျတယျ ” အားသားရယျ ဖွညျးဖွညျးနျော အနျတီ အလိုးမခံရတာ ကွာပီသားရယျ “။
ဟုတျလဲဟုတျတယျ လီးစထိုးတဲ့အခြိနျမှာ စီးပွီးကွပျနတောပဲ ” ဗွဈ ဗွဈ စှပျစှပျ ” ” အား လိုးလို့ကောငျးလိုကျတာ အနျတီရယျ နတေို့ငျး လိုးမှာနျော ” ” အေးအေး လိုးလိုး သားစိတျကွိုကျလိုး ” ” ဟုတျ ” ကနြျောလဲ လီးကို အဖြားထိဆှဲထုတျပီး တဈဆုံးထိုးထညျ့ နဲ့ လိုးလိုကျတာ ဒျေါစံပါယျ့ခငျဗြာ ကော့တကျလာပွီးတဈခြီပွီး သှားတယျ ။ သူလဲ ပွီးသှားရော” ” သားမပွီးသေးဘူးလား ” ” ဟုတျအနျတီမပီးသေးဘူး ” ” ဒါဆိုထ အနျတီစုပျပေးမယျ ” ဒီတခါ အျောရတဲ့သူက ကနြျောဖွဈသှားတယျ၊ ဒျေါစံပါယျက လီးကို ရခေဲခြောငျးစုပျသလို စုပျပွီး ဒဈနားတဝိုကျကို လြှာနဲ့ သတျလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ ” အားကောငျးလိုကျတာ အနျတီရယျ အဲလိုလေး လုပျပေးစမျးပါ
လီးကို တခြောငျလုံး လြှာနဲ့ယကျပေးအနျတီ ပွီးရငျး အရငျထိရောကျအောငျစုပျပေးနျော ” ဒျေါစံပါယျလဲ ကနြျောပွောတဲ့အတိုငျး သခြောလိုကျလုပျပေးတယျ၊ ၁၀မိနဈလောကျကွာတော့ ” အနျတီလိုးကွရအောငျ လေးဘကျကုနျးပေးနျော ကနြျောနောကျကနလေိုးမယျ ” ” အငျး လိုးသား ” ဆိုပွီး လေးဘကျထောကျပေးတယျ ကနြျောလဲ နောကျမှာ နရောယူ ပီး လီးကိုတကေ့ာခါးကိုကိုငျပွီး စောငျ့ထညျ့လိုကျတယျ ။ ” အား … နာတယျသားရယျ ဖွညျးဖွညျးလုပျပါ သားလီးက ရှညျတော့ သားအိမျကိုထောကျနတေယျ ” ဟုတျ အနျတီ ” ဆိုပွီး ကနြျောလဲ တရစပျကိုစောငျ့ပဈတာ တျောတျောလေးလဲ ကွာလာတော့ တအားပွီးခငျြလာတာနဲ့ လီးကို ဒျေါစံပယျရဲ့ စောကျဖုတျထဲတဆုံး နှဈကာ လီးရတှေေ ပနျးထုတျလိုကျတော့တယျ ။
ကနြျောလဲ လီးရတှေကေို ဒျေါစံပါယျ စောကျဖုတျထဲကို ပနျးထဲပွီး သူ့ကို ဖတျ ထားကာ နဖူးလေးကို နမျးလိုကျတယျ၊ သူက ခြှေးစို့နတေဲ့မကျြနှာလေးနဲ့ ” ကောငျမလေးတှနေဲ့မရှုပျရဘူးနျော သားလိုးခငျြတဲ့ ဆန်ဒရှိတိုငျး အနျတီကိုပဲလိုး ” ” စိတျခပြါအနျတီ၊ ကနြျောက အနျတီကိုတှကေ့တညျးက လိုးခငျြနတော ” ” ဟယျကွညျ့စမျး ဒီက လူကောငျးလေးမှတျလို့ ” ” ကဲပါအနျတီရယျ လိုးပဲလိုးပီးနပေေါ့ လာအမောဖွရေငျးနဲ့ လကျကနျြဘေးဖွတျလိုကျရအောငျ ” ” အေး အနျတီ အင်ျကြီဝတျလိုကျအုံးမယျ ” ” အာ ဝတျမနပေါနဲ့အနျတီ ကနြျော ကွညျ့လို့မဝသေးဘူး ” ဆိုပွီး ဧညျ့ခနျးထဲကို ဆှဲချေါလာခဲ့တယျ၊
အရကျသောကျရငျးနဲ့ ” သားကမိနျးမတှနေဲ့ လုပျဖူးလား ” ” မလုပျဖူးပါဘူးအနျတီ အနျတီရော ဘယျသူတှနေဲ့လိုးသေးလဲ ” ” ဘာလဲ သားက အနျတီကိုအထငျသေးတာလား ” ” မဟုတျပါဘူးအနျတီရယျ သားက ဒီအတိုငျးပဲမေးကွညျ့တာ ” ” အေးပါ မဟုတျရငျလဲ ပွီးတာပဲ ပွီးတော့ သားလီးကကွီးလိုကျတာ ရှညျလဲရှညျတယျ၊ အနျတီသားအိမျကို ခဏတိုငျးထောကျနတောပဲ ” ” ဟုတျလား အနျတီယောကြာင်္းလီးနဲ့ ကနြေျာ့လီး ဘယျသူက ပိုကွီးလဲ ” ” သားကကွီးတာပေါ့ သူလီးကသားလီးလောကျမကွီးဘူး တိုလဲတိုတယျ ဟော ပွောရငျးဆိုရငျးကွညျ့။
မာနပွေနျပွီ ” အနျတီက လှလို့ပေါ့ အနျတီ ကနြေျာ့လီးကို စုပျပေးအုံးနျော ” သိပျကွိုကျနတေယျ ဟုတျလား ” ” ဟီး အန်တီကလဲ ” ” ကဲလာ “ဆိုပွီး ကွမျးပွငျမှာ ဒူးထောကျခလြိုကျပွီး ကနြေျာ့ လီးကို ငုံစုပျလိုကျတယျ၊ ပီးတော့ ဒဈနားတဝိုကျကို လြှာနဲ့ သပျပေးနတေယျ ” အားကောငျးလိုကျတာအနျတီရယျ အဲလိုလေး လီးတဈခြောငျးလုံးကို လြှာလေးနဲ့ ယကျပေး ပွီးမှ တဈဆုံးစုပျနျော ” အနျတီလဲ ကနြျောပွောတဲ့အတိုငျး သခြောလုပျပေးပါတယျ ” အား အား ကောငျးတယျ စုပျစုပျအနျတီ အား အား ရှီး ရှီး ..အနျတီ ကနြျောမရတော့ဘူး လိုးရအောငျ နျော အနျတီ ဆိုဖာပျေါမှာ လေးဘကျကုနျပေးနျော ” ” အငျး ကုနျးပေးမယျ “ဆိုပွီး သခြောကုနျးပေးတယျ၊ ကနြျောလဲ အောကျကို ဆငျး သူ့နောကျမှာနရောယူပွီး လီးကို ကိုငျကာ သှငျးလိုကျတယျ ” ဗွဈဗွဈ အားအား နာတယျသားရယျဖွဖွေနေျော သားလီးက အရမျးကွီးတယျ ” ” ဟုတျအနျတီ ” ကနြျောလဲ လီးကိုတဈဆုံး အသှငျးအထုတျဖွေးဖွေးခငျြး လုပျပွီး သူ့ နို့ကိုလှမျးကိုငျကာ ပါးစပျကလဲ နားရှကျတဝိုကျကို လြှာနဲ့မှပေ့ေးနမေိတယျ။
နဲနဲကွာလာတော့ ” အား သားရယျ အနျတီမနနေိုငျတော့ဘူး မွနျမွနျလုပျပါတော့နျော ” သူပွောတာနဲ့ ကနြျောလဲ အရှိနျမွငျ့တငျလိုကျတယျ ” ဖကျဖကျဖကျ ဖှတျဖှတျ စှပျစှပျ ” ” အရမျးကောငျးတာပဲ သားရယျ မွနျမွနျ မွနျမွနျလေးလုပျပါ အနျတီပွီးတော့မယျ ” ဆိုပွီး ကော့တကျခါ ဒျေါစံပါယျတဈယောကျ နောကျတဈကွိမျထကျပွီးသှားတယျ ကနြျောလဲ နောကျကနေ အသကုနျစောငျ့ပွီး လီးရတှေကေို ဒျေါစံပါယျ့ စောကျခေါငျးထဲကို ပနျးထညျ့လိုကျတယျ ဒီလိုနဲ့ အဲဒီညက ငါးခြီလောကျလိုးဖွဈတယျ၊ အမွဲတမျးလဲ လိုးဖွဈတယျ၊ ဒီလိုနဲ့ တလလောကျရှိတော့ ဒျေါစံပါယျက နယျမှာရှိတဲ့ သူတို့ခွံကို ရောငျးဖို့ ပွနျသှားတယျ၊ အဲဒီမှာ တလနီးပါးလောကျကွာတယျ ဟိုမှာ အရောငျးအဝယျက အဆငျမပွလေို့ စောငျ့နရေငျးနဲ့ ကွာသှားတာတဲ့ ၊
ကနြျောလဲ အရူးအမဲစားကြှေးသလိုဖွဈနတေယျ၊ သူနဲ့ဖုနျးပွောတိုငျး သူ့ကိုလှမျးတဲ့အကွောငျး လိုးခငျြတဲ့အကွောငျး ပွောဖွဈတယျ၊ ဒီလိုနဲ့ သူပွနျရောကျလာတယျ၊ ဒါပမေယျ့ မတှရေ့ပွနျဘူး၊ နယျက အမြိုးတှဘေုရားဖူးလိုကျလာလို့တဲ့၊ အဲဒါနဲ့ တဈပါတျလောကျကွာမှတှရေ့တယျ၊ မှတျမှတျရရ အဲ့နကေ့ ကနြေျာ့မှေးနလေ့ေ၊ သူကမှေးနကေိ့တျရယျ ဝိုငျပုလငျးနဲ့ သခြောပွငျပေးတယျ ပွီးတော့ သားအတှကျမှေးနလေ့ကျဆောငျ ဆိုပွီး နာရီတဈလုံးပေးတယျ၊ ဈေးကွီးမယျ့ပုံပဲ၊ ကနြျောလဲ ” နာရီတော့ မလိုခငျြဘူး ” ” ဘာဖွဈလို့လဲ ” ဈေးကွီးလို့ ” ပွောလိုကျတယျ၊ သူကသားမယူရငျ အနျတီ စိတျမကောငျးဖွဈမှာပဲ လို့ပွောတော့ ကနြျောလကျခံလိုကျတယျ ဒီနသေ့ားစိတျကွိုကျပွော အနျတီလုပျပေးမယျတဲ့။
အဲဒါနဲ့ ကနြျောလဲ ” ဒါဆို သားလိုခငျြတာ အနျတီကပေးမှာလား ” ” သားက ဘာလိုခငျြလို့လဲ ” ” ကနြျောအနျတီ ဖငျကိုလိုးခငျြတယျ ” လို့ ပွောလိုကျတော့ သူစဉျးစားသှားပွီး ပွီးတော့မှ ” သားလုပျခငျြရငျလုပျလေ ဒါပမေယျ့ ဖွေးဖွေးတော့ လုပျရမယျနျော ” ကနြျောလဲ ဟုတျဆိုပွီး ” အနျတီမှာ အုနျးဆီရှိလား ” ” ရှိတယျ ” ဆိုပွီး အုနျးဆီယူပေးတယျ၊ ပွီးတော့အနျတီကကနြေျာ့ လီးကို စုပျပေးတယျ ၊ ကနြျောလဲ ဒျေါစံပယျ့ကို ပွောငျးပွနျ ဖွဈအောငျလုပျပီး 69 ပုံစံနဲ့ သူစောကျဖုတျကို ယကျပေး လိုကျတယျ၊ ပီးတော့ လကျကို အုနျးဆီသုတျပီး သူ့ဖငျထဲကို လကျတဈခြောငျးထညျ့ပွီး လိုးပေးနတေယျ၊ ခဏကွာတော့ လကျ၂ခြောငျးပူးထဲ့ကွညျ့လိုကျတော့ မဝငျဘူးတဈနတေယျ၊ ကနြျောလဲ အနျတီရပီ လိုးကွမယျဆိုပွီး လေးဘကျကုနျးခိုငျးပီး သူ့စအိုဝကို အုနျးဆီလောငျးထညျ့၊ လီးကိုလဲ ရှဲနအေောငျသုတျပွီး ဖငျထဲကို လီးထိုးထညျ့လိုကျတယျ
” အားနာတယျ မရဘူးထငျတယျသားရယျမလုပျပါနဲ့တော့ ပွနျထုတျလိုကျပါနျော ” ကနြျောလဲ သူ့ဖငျဝမှာ ကနြေျာ့လီးဒဈဝငျနမှေတော့ သူပွောတဲ့အသံကိုမကွားတော့ပဲ လီးဝငျအောငျသာ အားစိုကျလိုးနမေိတယျ ဖငျကစီးပီးကွပျနတောပဲ၊ လိုးရတာ တျောတျောကောငျတယျ ကနြျောလဲ လီးတဆုံးဝငျအောငျထညျ့ ဆီထပျလောငျးပွီး လိုးတာ အနျတီမှာတော့ နာလှနျးလို့ မကျြရညျတှဝေဲခဲ့ရတယျ ကနြျောလဲ လီးအဝငျအထှကျပုံမှနျလေးဖွဈရော၊ နောကျကနေ အရှိနျနဲ့ ပဈဆောငျ့ပွီးလိုးတော့တာပဲ ” ကောငျးလိုကျတာအနျတီရယျ ” ဆိုပွီး လကျတဖကျကလဲ သူစောကျဖုတျကိုနှိုကျ အစိလေးကိုပှတျပေးနဲ့ လိုးလိုကျတာ သူလဲ အသံတှညေိမျးပွီး ” အားအား ကောငျးတယျသား လိုးလိုး နာနာလိုးပါ ” နဲ့အျောပွီး ပွီးသှားတယျ။
ကနြျောလဲ စောငျ့လိုးရငျး သူ့ဖငျထဲမှာပဲ လီးရတှေကေို ပနျးထုတျလိုကျတယျ၊ နောကျတော့ မှေးနကေိ့တျ လှီး၊ တယောကျတယောကျအပွနျအလှနျခှငျ့ကြှေး ဝိုငျခှကျတှေ သောကျပွီး အဲညက ဖငျရော စောကျဖုတျရော ၂ခြီစီလိုးဖွဈတယျ၊ ကနြျောမှေးနမှေ့ာ အရမျးကို ပြျောခဲ့ရတယျ ကြေးဇူးပါ အနျတီစံပယျရယျ၊ ဒါပမေယျ့ ကနြေျာ့ရဲ့အပြျောတှကေ အဲဒီညက နောကျဆုံးဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူး၊ နောကျရကျမနကျအလုပျသှားပွီး ညနေ အလုပျဆငျး အိမျပွနျရောကျတော့မှ ကနြေျာ့ အခနျးဖျောက စာလေးတစောငျပေးတယျ၊ စာထဲမှာတော့ … … သားရေ အနျတီကိုမလေို့ကျပါတော့ သားနဲ့အနျတီဘဝက ဘယျလိုမှ ပေါငျးစပျလို့မဖွဈနိုငျပါဘူးကှယျ၊ အနျတီလဲ သားတှရှေိတဲ့အမရေိကကို လိုကျသှားပါပွီ၊
သားကို ဖှငျ့မပွော ရကျလို့ မပွောပွခဲ့တာ အနျတီကိုခှတျလှတျပါနျော ၊ သားနဲ့ တှခေဲ့တဲ့ အခြိနျခဏလေးအတှငျးမှာ အနျတီအရမျးကို ပြျောရှငျခဲ့ရပါတယျ၊ သားလညျး သငျ့တျောတဲ့မိနျးခလေးရှာပွီး လကျထပျလိုကျပါနျော ၊ သားကိုအရမျးခဈြပါတဲ့ အနျတီစံပယျ … ဒီစာလေးကိုဖတျပီးကနြေျာ့ရဲ့ ရငျထဲမှာ လှိုကျခနဲ့ဖွဈသှားပွီး ကနြေျာ့ ပါပွငျမှာ မကျြရညျတှစေီးကနြပေါတယျ၊ ဘယျလိုမှ မဖွဈနိငျတွဲ့ ကနြျောတို့ဘဝကို ကနြျောနားလညျပါတယျ အနျတီ တကယျဆိုရငျ အနျတီကနြျောကို နှုတျဆကျခှငျ့လေးတော့ ပေးသငျ့တာပေါ့ အနျတီရယျ၊ အခါအခှငျ့သငျ့လို့ အနျတီ မွနျမာပွညျကို ပွနျလာအုနျးမယျဆိုရငျ မြှျောလငျ့ခွငျးမြားစှာနဲ့ ဆီးကွိုနမေယျ့ ကောငျလေးတယောကျ ရှိနသေေးတယျဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့အနျတီရယျ မကျြရညျစမြားဖွငျ့ …. ပွီးပါပွီ။
ဒေါ်စံပါယ်က အသက် ၄၅ လောက်ရှိပီ သူက အမြဲတမ်း မြန်မာဝမ်းဆက် ဝတ်တယ်၊ သူ့ဖင်ကြီးတွေက ကောက်ချိတ်နေပီး နို့တွေကလဲ အယ်နေတာပဲ၊ သူနဲ့တွေ့ပုံက တနေ့ ကျနော် အလုပ်က အပြန် လမ်းမှာ အထုတ်တွေမနိုင်မနင်းနဲ့ အန်တီတယောက်ကိုတွေ့တော့ ကျနော်လဲ ကူညီချင်တာနဲ့ ” အန်တီ ကျနော် ကူသယ်ပေးရမလား ” ” အေးကွယ်ကျေးဇူးပါသားရယ် ” ” ဟုတ် ရပါတယ် ဒါနဲ့ အန်တီက ဘယ်မှာနေတာလဲ ” ” အန်တီက မုဒိတာအိမ်ယာမှာကွယ့် ” ” ဟုတ်လား ဒါဆို ကျနော်နဲ့အတူတူပဲပေါ့ ကျနော် က အဆောင် (C) ၅ လွှာမှာ နေပါတယ် ” ” အန်တီကလဲ အဲဒီမှာပဲ ၃ လွှာမှာနေတယ် ” ” ဒါဆိုအဆင်ပြေတာပေါ့ ကျနော် အန်တီကို အခန်းထိ လိုက်ပို့ပေးပါ့မယ် ” ” အေးကွယ်ကျေးဇူးပါ သားရယ် ” ဒီလိုနဲ့ စကားပြောရင် လျှောက်လာလိုက်တာ သူနေတဲ့ အခန်းကိုရောက်လာတယ် ။ ” ကဲပါသားရယ် ရောက်လက်စနဲ့ ကော်ဖီလေးဘာလေး သောက်ပီးမှ ပြန်ပေါ့ ” ” ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျ ” ဒီလိုနဲ့ ကော်ဖီသောက်ရင် စကားတွေ ပြောကြတာ။
ဒေါ်စံပယ်မှာ ယောကျားဆုံးသွားတာ ၈ နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ သား၂ယောက် ရှိပြီး အမေရိက မှာ ကျောင်းတက်အလုပ်လုပ်ပြီး အိမ်ထောင်ကျနေပီဖြစ်ကြောင်း သိရတယ်၊ သူနဲ့ကျနော် ဖုန်းနံပါတ်တွေ အပြန်အလှန် ပေးပီးတော့ အကူအညီလိုရင် ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း ပြောပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်၊ ကျနော့် အခန်းရောက်တော့ ဒေါ်စံပါယ့် ဖင်ကြီးတွေကို မှန်းပီး ဂွင်းထုလိုက်တာ လီးရေတွေ အများကြီးထွက်သွားတယ် ။ ဒီလိုနဲ တလလောက်ကြာတော့ ကျနော်နဲ့ ဒေါ်စံပယ်ဟာ ဖုန်းတွေအမြဲတမ်းဆက် ကြုံရင်တွေ့ကြ၊ သူအကူအညီလိုရင်ပေးနဲ့ ရင်းနီးမှု အတော်ရခဲ့ပါတယ်၊ ရင်းနှီးမှု ရလာတာနှင့်အမျှ သူ့ကို လိုးချင်တဲ့ စိတ်ကလဲ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် သူရဲ့ အနေအထိုင် သေသပ်ပိရိမှုကြောင့် သူ့ကိုလိုးရဖို့ ဘယ်လိုကြံရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ သောကြာနေ့မှာပေါ့၊
နောက်ရက် စနေတနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့ ညအမှုးသောက်ပြီး နှပ်မယ် ဆိုတဲ့အကြံနဲ့ သောက်နေကြ ဒန်းဖိုက် တပြားရယ် အအေးရယ် အမြည်းရယ် ဝယ်လာပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်၊ အိမ်ရောက်တော့ ည ၈နာရီရှိနေပီ၊ အဲဒါနဲ့ ရေးမိုးချိုးပြီး အရက်ခွက်နဲ့ အမြည်းတွေပြင် လပ်တော့က အောကားလေးဖွင့်ပြီး ဇရက်မင်း စည်းစိမ်ကို ခံစားနေခိုက် ဖုန်းဝင်လာတယ်၊ ကြည့်လိုက်တော့ ဒေါ်စံပယ်ဆီက ဖုန်းဖြစ်နေလို့ ကိုင်လိုက်တယ် ။ ” ဟဲလို အန်တီ .. ကျနော်အောင်အောင်ပါ ဘာအကူအညီ ပေးရမလဲ ” ” အေးကွယ် မောင်အောင်အောင် ဒီမှာလေအန်တီ့ လပ်တော့ သုံးနေရင်းနဲ့ ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိလို့ ” ” အော်ဟုတ် အန်တီ ကျနော်ခုလာခဲ့ပါမယ် ပြီးတော့ အန်တီအရေးကြီးရင်သုံးလို့ရအောင် ကျနော့်လပ်တော့လေးပါ ယူလာခဲမယ် ” ” အေးကျေးဇူးပါသားရယ် ” ကျနော်လဲ သောက်လက်စ အရက်ခွက်ကိုမော့ချလိုက်ပြီး လပ်တော့ကို ယူကား အဝတ်အစားမလဲတော့ပဲ ဘောင်ဘီအတို စွတ်ကျယ်လက်ပျက်လေးနဲ့ပဲထွက်လာခဲ့တယ်။
ဒါနဲ့ အန်တီစံပယ်အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ တံခါးခေါက်လိုက်တယ် အန်တီလဲ တံခါးလာဖွင့်ပေးရင် ကျနော့်အောက်ပိုင်းကို သေချာကြည့်နေတယ် ။ ဟာ သွားပီ အတွင်းခံဝတ်မလာတာရယ်၊ စောစောကအောကား ကြည့်ထားတဲ့အရှိန်ရယ်ကြောင့် ကျနော့လီးက ဘောင်းဘီထဲမှာ အမြှောင်းလိုက်ပေါ်နေတယ်၊ ကျနော်လည်း ရှက်ကလဲရှက် အားလဲနာတာနဲ့ ခါးလေးကိုင်းပီးဝင်လာခဲ့တယ်၊ အထဲရောက်တော့ ဒေါ်စံပယ်ကို ကျနော့လပ်တော့ထဲမှာ သူ့VZO အကောင့်နဲ့ လော့အင်လုပ်ပေးပြီး သူ့သားတွေကို ခေါ်ပေးလိုက်တယ် ။ ဒေါ်စံပါယ် စကားပြောနေတုန်း သူ့လပ်တော့ ကို ဘက်ထရီဖြုတ် memory ကဒ်နဲ့ ဂရပ်ဖစ်ကဒ်တွေကိုဖြုတ် ခဲဖျက်နဲ့ တိုက် အတွင်းပိုင်းကို နည်းနည်းပါးပါး သန့်ရှင်းရေးလုပ် ပြန်တပ်ပီးတော့ ပါဝါဖွင့်လိုက်တာ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် လပ်တော့က ပွင့်လာတယ်၊ ပီးတော့ ကျနော်လဲ ဗိုင်းရစ်ဆောဖ်ဝဲလ် ကိုဖွင့်ပြီး ဗိုင်းရပ် စစ်ပေးလိုက်ပါတယ် ၊ အဲဒီမှာ ဗိုင်းရစ် တွေတွေ့တယ်၊ ကျနော်လဲ မသင်ကာတာနဲ့ သူ့ history ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အားလားလား အောဝက်ဆိုဒ်တွေ ဖွင့်ကြည်ထားတာပဲ။
ကျနော်လဲ အသံကိုပိတ် သူကြည့်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ပြန်ဖွင့် ကြည့်လိုက်တော့ Old & Young ကောင်လေးငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့ အန်ကြီးတွေ ဇာတ်လမ်းတွေ ကြည့်ပဲ၊ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ သူလဲပြောပီးရော ကျနော်လဲ ဗိုင်းရစ် တွေသတ်ပီး ။ ” ရပြီအန်တီ ဗိုင်းရပ်တွေ များနေလို့ ဟန်းသွားတာဖြစ်မယ် ထင်တယ်၊ နောက်ရက်မှ ကျနော် ဆိုင်ယူသွားပြီးသေချာ စစ်ပေးပါမယ် ” ” အေးကွယ်ကျေးဇူးပါသားရယ် အန်တီလဲ သားတွေနဲ့ ပြောရအောင်ဝယ်ထားတာ သိပ်မသုံးတက်ဖူး ” ” ဟုတ်ရပါတယ်အန်တီ ” ” အော်ဒါနဲ့ မောင်အောင်အောင် အရက်သောက်နေတာလား ” ” ဟီး … ဟုတ်အန်တီ ကျနော်လဲ မနက်ဖြန်အလုပ်ပိတ်တာနဲ့ သောက်နေတာ ”
” အားနာလိုက်တာကွယ် သားကိုအနှောက်အယှက်ပေးသလို ဖြစ်နေပီ ” ” အာမဟုတ်တာ ရပါတယ်အန်တီရ ကျနော်လဲ ခုမှသောက်တာ တစ်ခွက်ပဲရှိပါသေးတယ် ” ” အန်တီဆီမှာလဲ ဝိုင်ပဲရှိတယ် … အဲ … ဒါဆိုဒီလိုလုပ်လေ သားလက်ကျန်လေး သွားယူလိုက် အန်တီ အမြည်းလုပ်ပေးထားမယ် ” ” ဟုတ်အန်တီ “ဆိုပြီး ကျနော်လဲ အခန်းပြန်ကာ လက်ကျန် ပုလင်းကိုယူ လိုရမယ်ရ MaxMan တစ်လုံးသောက်ပီး ပြန်လာတယ်၊ ကျနော်ပြန်ရောက်တော့ ဒေါ်စံပယ်က အရက် ခွက်ရယ် အသီးပုဂံရယ် ဆက်သားခြောက်ဖုတ်ရယ် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီ ” သားရေ ခဏထိုင်အုံးနော် အန်တီရေချိုးလိုက်အုံးမယ် ” ” ဟုတ်ရပါတယ်အန်တီ ” ကျနော်လဲ သူရေချိုးနေတုန်း အရက်ခွက်ငှဲ့ပြီး စော်ကြီးကို ဘယ်လိုလိုးရမလဲအကြံထုတ် နေတယ်။
ခဏကြာတော့ ရေမွှေးနံ့သင်းသင်လေးနဲ့အတူ ဒေါ်စံပါယ် ထွက်လာတယ်၊ကြည့်လိုက်တော့ ဖဲသားညဝတ် အင်္ကျီအောက်မှာ ပြူးထွက်နေတဲ့နို့ကြီး နှစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်တော့ ကျနော့်စိတ်တွေ ဘယ်လိုမှကို ထိန်းလို့မရတော့ဘူး၊ ဒေါ်စံပယ်က ဝိုင်ခွက်ကို ငှဲ့ပီး ချီးယား သားရေဆိုပီး ခွက်တိုက်ခါ ကျနော့ဘေးမှာ ဝင်ထိုင်ပီးမော့ သောက်လိုက်တယ် ။ ” ဒါနဲ့ သားကဂျင်ဆော့လား ” ” မဆော့ပါဘူး အန်တီ ဘာဖြစ်လို့လဲ ” ” သားလက်မောင်းတွေကို ကြည့်ပါအုံကြွက်သားတွေနဲ့ သားရည်းစားတွေဘာတွေ ရနေပီလား ” ” မရသေးပါဘူး အန်တီ ” ” ဟုတ်လို့လား ဒီလောက်တောင့်ပြီး ဖြောင့်တဲ့ကောင်လေးမှာ ရည်းစားမရှိတာ မယုံပါဘူး ” ” အာ … မတောင့်ပါဘူးပါဘူး အန်တီရယ်၊ အန်တီကမှ တောင့်တာ ”
” ဟုတ်လို့လား အန်တီကအိုနေပါပီကွယ် ဘယ်နေရာများ တောင့်လို့လဲ ” ” အန်တီတစ်ကိုယ်လုံးတောင့်တယ် အန်တီယောကျာင်္းဆိုရင် အရမ်းကံကောင်းတာတာပဲနော် ပြီးတော့ သူက အန်တီကို သိပ်ချစ်မှာပဲနော် ” အဲလိုပြောလိုက်တော့ သောက်ထားတဲ့ အရှိန်နဲ့ သူ့ယောကျာင်္းကို သတိရပြီး ကျနော့် ပုခုံးပေါ်မျက်နှာ အပ်ပြီး ငိုတော့တာပဲ၊ သူငိုတာအရေးမကြီဘူး ကျနော့်မှာ သူ့နို့ကြီးနဲ့ ထိပြီး လီးကတအားတောင်လာတယ် ၊ ကျနော်လဲ သူ့ကိုဖတ်ထားပီး ကြောကို သပ်ခါနှစ်သိမ့်ပေးနေမိတယ် နဲနဲကြာလာတော့ အသံတိတ်သွားပီး ကျနော်ကို တင်းတင်းလေး ပြန်ဖတ်ထားတယ် ။
” ကျနော့်စိတ်တွေ ထိန်းလို့မရတော့ဘူးအန်တီရယ် အရမ်းချစ်တယ် ပြွတ်..ပြွတ်.. ” ကျနော်လဲ ဒေါ်စံပါယ်နှုတ်ခမ်းကို စုပ်လိုက်တယ်၊ သူလဲ ကျနော်ကို ရွှန်းရွှန်းစားစား ပြန်ကြည့်ပြီး ပြန်နမ်းတယ်၊ အဲဒီမှာ အန်တီကို အရမ်းချစ်တယ် တဖွဖွပြောရင် ရမက်ပြင်းပြင်းနဲ့ တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ကြတယ် ကျနော်လဲ နမ်းနေရင်းက ဒေါ်စံပယ်ရဲ့နို့ကြီးတွေကို နယ်ရင်း အင်္ကျီတွေကို ချွတ်၊ နှစ်ယောက်လုံး ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်တဲ့အချိန်ထိ အနမ်းမပျက်ဘူး၊ ပြီးမှဒေါ်စံပယ်က ” အိပ်ခန်းထဲ သွားရအောင်သားရယ် ” တဲ့ ၊ အိပ်ခန်းထဲ ရောက်တော့ ကုတင်ပေါ်မှာ လှဲဖတ်ရင်း ကျနော့်ပညာတွေ ပြရတော့တာပဲ ၊ ကျနော်လဲ ဒေါ်စံပါယ် ပါးစပ်ကိုနမ်း ပြီးတော့ နားတွေလည်ပင်းတွေ လျှာနဲ့လျက် နို့ကို ဘယ်ပြန် ညာပြန်စို့ လက်ကလဲ စောက်ဖုတ်ကြီးကို လက်နဲ့ပွတ်ပေး၊ ပြီးတော့ အောက်ကိုလျောချ ချက်နားတဝိုက်ကို လျှာနဲ့မွှေ့ပီး စောက်ဖုတ် ဆီကို ဆင်းလာတယ် ၊
အဲဒီတော့မှ ” သားရယ် ဖုန်းတွေနိမ့်ကုန် ပါ့မယ် ” ” အာ အန်တီကလဲ မနိမ့်ပါဘူး အန်တီကို ကောင်းအောင် လုပ်ပေးချင်လို့ပါ ” ဆိုပြီး လျှာအပြားလိုက် ယက်ချလိုက်တယ်၊ ” ရှီး….. အား ကောင်းလိုက်တာ သားရယ် ” ကျနော်လဲ လျှာကို စောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်နိုင်သမျှ ဝင်အောင်ထိုးပြီး မွှေပေးလိုက်တော့ ” အား ….ရှီး ….. လူကိုအသေသတ်နေတာလား သားရယ် ” ကျနော်လဲ အစိကို ပြွတ်ခနဲ နေအောင် စုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ” အား….အား သားရယ်လုပ်ပါတော့ အန်တီ … အန်တီ မနေနိုင်တော့လို့ပါသားရယ် ” ကျနော်လဲ ပေါင်ကြားမှာ နေရာယူပြီး လီးကိုတွေ့ပြီး သွင်းလိုက်တယ် ” အားသားရယ် ဖြည်းဖြည်းနော် အန်တီ အလိုးမခံရတာ ကြာပီသားရယ် “။
ဟုတ်လဲဟုတ်တယ် လီးစထိုးတဲ့အချိန်မှာ စီးပြီးကြပ်နေတာပဲ ” ဗြစ် ဗြစ် စွပ်စွပ် ” ” အား လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာ အန်တီရယ် နေ့တိုင်း လိုးမှာနော် ” ” အေးအေး လိုးလိုး သားစိတ်ကြိုက်လိုး ” ” ဟုတ် ” ကျနော်လဲ လီးကို အဖျားထိဆွဲထုတ်ပီး တစ်ဆုံးထိုးထည့် နဲ့ လိုးလိုက်တာ ဒေါ်စံပါယ့်ခင်ဗျာ ကော့တက်လာပြီးတစ်ချီပြီး သွားတယ် ။ သူလဲ ပြီးသွားရော” ” သားမပြီးသေးဘူးလား ” ” ဟုတ်အန်တီမပီးသေးဘူး ” ” ဒါဆိုထ အန်တီစုပ်ပေးမယ် ” ဒီတခါ အော်ရတဲ့သူက ကျနော်ဖြစ်သွားတယ်၊ ဒေါ်စံပါယ်က လီးကို ရေခဲချောင်းစုပ်သလို စုပ်ပြီး ဒစ်နားတဝိုက်ကို လျှာနဲ့ သတ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ” အားကောင်းလိုက်တာ အန်တီရယ် အဲလိုလေး လုပ်ပေးစမ်းပါ
လီးကို တချောင်လုံး လျှာနဲ့ယက်ပေးအန်တီ ပြီးရင်း အရင်ထိရောက်အောင်စုပ်ပေးနော် ” ဒေါ်စံပါယ်လဲ ကျနော်ပြောတဲ့အတိုင်း သေချာလိုက်လုပ်ပေးတယ်၊ ၁၀မိနစ်လောက်ကြာတော့ ” အန်တီလိုးကြရအောင် လေးဘက်ကုန်းပေးနော် ကျနော်နောက်ကနေလိုးမယ် ” ” အင်း လိုးသား ” ဆိုပြီး လေးဘက်ထောက်ပေးတယ် ကျနော်လဲ နောက်မှာ နေရာယူ ပီး လီးကိုတေ့ကာခါးကိုကိုင်ပြီး စောင့်ထည့်လိုက်တယ် ။ ” အား … နာတယ်သားရယ် ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ သားလီးက ရှည်တော့ သားအိမ်ကိုထောက်နေတယ် ” ဟုတ် အန်တီ ” ဆိုပြီး ကျနော်လဲ တရစပ်ကိုစောင့်ပစ်တာ တော်တော်လေးလဲ ကြာလာတော့ တအားပြီးချင်လာတာနဲ့ လီးကို ဒေါ်စံပယ်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲတဆုံး နှစ်ကာ လီးရေတွေ ပန်းထုတ်လိုက်တော့တယ် ။
ကျနော်လဲ လီးရေတွေကို ဒေါ်စံပါယ် စောက်ဖုတ်ထဲကို ပန်းထဲပြီး သူ့ကို ဖတ် ထားကာ နဖူးလေးကို နမ်းလိုက်တယ်၊ သူက ချွေးစို့နေတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ ” ကောင်မလေးတွေနဲ့မရှုပ်ရဘူးနော် သားလိုးချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိတိုင်း အန်တီကိုပဲလိုး ” ” စိတ်ချပါအန်တီ၊ ကျနော်က အန်တီကိုတွေ့ကတည်းက လိုးချင်နေတာ ” ” ဟယ်ကြည့်စမ်း ဒီက လူကောင်းလေးမှတ်လို့ ” ” ကဲပါအန်တီရယ် လိုးပဲလိုးပီးနေပေါ့ လာအမောဖြေရင်းနဲ့ လက်ကျန်ဘေးဖြတ်လိုက်ရအောင် ” ” အေး အန်တီ အင်္ကျီဝတ်လိုက်အုံးမယ် ” ” အာ ဝတ်မနေပါနဲ့အန်တီ ကျနော် ကြည့်လို့မဝသေးဘူး ” ဆိုပြီး ဧည့်ခန်းထဲကို ဆွဲခေါ်လာခဲ့တယ်၊
အရက်သောက်ရင်းနဲ့ ” သားကမိန်းမတွေနဲ့ လုပ်ဖူးလား ” ” မလုပ်ဖူးပါဘူးအန်တီ အန်တီရော ဘယ်သူတွေနဲ့လိုးသေးလဲ ” ” ဘာလဲ သားက အန်တီကိုအထင်သေးတာလား ” ” မဟုတ်ပါဘူးအန်တီရယ် သားက ဒီအတိုင်းပဲမေးကြည့်တာ ” ” အေးပါ မဟုတ်ရင်လဲ ပြီးတာပဲ ပြီးတော့ သားလီးကကြီးလိုက်တာ ရှည်လဲရှည်တယ်၊ အန်တီသားအိမ်ကို ခဏတိုင်းထောက်နေတာပဲ ” ” ဟုတ်လား အန်တီယောကျာင်္းလီးနဲ့ ကျနော့်လီး ဘယ်သူက ပိုကြီးလဲ ” ” သားကကြီးတာပေါ့ သူလီးကသားလီးလောက်မကြီးဘူး တိုလဲတိုတယ် ဟော ပြောရင်းဆိုရင်းကြည့်။
မာနေပြန်ပြီ ” အန်တီက လှလို့ပေါ့ အန်တီ ကျနော့်လီးကို စုပ်ပေးအုံးနော် ” သိပ်ကြိုက်နေတယ် ဟုတ်လား ” ” ဟီး အန္တီကလဲ ” ” ကဲလာ “ဆိုပြီး ကြမ်းပြင်မှာ ဒူးထောက်ချလိုက်ပြီး ကျနော့် လီးကို ငုံစုပ်လိုက်တယ်၊ ပီးတော့ ဒစ်နားတဝိုက်ကို လျှာနဲ့ သပ်ပေးနေတယ် ” အားကောင်းလိုက်တာအန်တီရယ် အဲလိုလေး လီးတစ်ချောင်းလုံးကို လျှာလေးနဲ့ ယက်ပေး ပြီးမှ တစ်ဆုံးစုပ်နော် ” အန်တီလဲ ကျနော်ပြောတဲ့အတိုင်း သေချာလုပ်ပေးပါတယ် ” အား အား ကောင်းတယ် စုပ်စုပ်အန်တီ အား အား ရှီး ရှီး ..အန်တီ ကျနော်မရတော့ဘူး လိုးရအောင် နော် အန်တီ ဆိုဖာပေါ်မှာ လေးဘက်ကုန်ပေးနော် ” ” အင်း ကုန်းပေးမယ် “ဆိုပြီး သေချာကုန်းပေးတယ်၊ ကျနော်လဲ အောက်ကို ဆင်း သူ့နောက်မှာနေရာယူပြီး လီးကို ကိုင်ကာ သွင်းလိုက်တယ် ” ဗြစ်ဗြစ် အားအား နာတယ်သားရယ်ဖြေဖြေနော် သားလီးက အရမ်းကြီးတယ် ” ” ဟုတ်အန်တီ ” ကျနော်လဲ လီးကိုတစ်ဆုံး အသွင်းအထုတ်ဖြေးဖြေးချင်း လုပ်ပြီး သူ့ နို့ကိုလှမ်းကိုင်ကာ ပါးစပ်ကလဲ နားရွက်တဝိုက်ကို လျှာနဲ့မွှေ့ပေးနေမိတယ်။
နဲနဲကြာလာတော့ ” အား သားရယ် အန်တီမနေနိုင်တော့ဘူး မြန်မြန်လုပ်ပါတော့နော် ” သူပြောတာနဲ့ ကျနော်လဲ အရှိန်မြင့်တင်လိုက်တယ် ” ဖက်ဖက်ဖက် ဖွတ်ဖွတ် စွပ်စွပ် ” ” အရမ်းကောင်းတာပဲ သားရယ် မြန်မြန် မြန်မြန်လေးလုပ်ပါ အန်တီပြီးတော့မယ် ” ဆိုပြီး ကော့တက်ခါ ဒေါ်စံပါယ်တစ်ယောက် နောက်တစ်ကြိမ်ထက်ပြီးသွားတယ် ကျနော်လဲ နောက်ကနေ အသကုန်စောင့်ပြီး လီးရေတွေကို ဒေါ်စံပါယ့် စောက်ခေါင်းထဲကို ပန်းထည့်လိုက်တယ် ဒီလိုနဲ့ အဲဒီညက ငါးချီလောက်လိုးဖြစ်တယ်၊ အမြဲတမ်းလဲ လိုးဖြစ်တယ်၊ ဒီလိုနဲ့ တလလောက်ရှိတော့ ဒေါ်စံပါယ်က နယ်မှာရှိတဲ့ သူတို့ခြံကို ရောင်းဖို့ ပြန်သွားတယ်၊ အဲဒီမှာ တလနီးပါးလောက်ကြာတယ် ဟိုမှာ အရောင်းအဝယ်က အဆင်မပြေလို့ စောင့်နေရင်းနဲ့ ကြာသွားတာတဲ့ ၊
ကျနော်လဲ အရူးအမဲစားကျွေးသလိုဖြစ်နေတယ်၊ သူနဲ့ဖုန်းပြောတိုင်း သူ့ကိုလွမ်းတဲ့အကြောင်း လိုးချင်တဲ့အကြောင်း ပြောဖြစ်တယ်၊ ဒီလိုနဲ့ သူပြန်ရောက်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့် မတွေ့ရပြန်ဘူး၊ နယ်က အမျိုးတွေဘုရားဖူးလိုက်လာလို့တဲ့၊ အဲဒါနဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကြာမှတွေ့ရတယ်၊ မှတ်မှတ်ရရ အဲ့နေ့က ကျနော့်မွေးနေ့လေ၊ သူကမွေးနေ့ကိတ်ရယ် ဝိုင်ပုလင်းနဲ့ သေချာပြင်ပေးတယ် ပြီးတော့ သားအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင် ဆိုပြီး နာရီတစ်လုံးပေးတယ်၊ ဈေးကြီးမယ့်ပုံပဲ၊ ကျနော်လဲ ” နာရီတော့ မလိုချင်ဘူး ” ” ဘာဖြစ်လို့လဲ ” ဈေးကြီးလို့ ” ပြောလိုက်တယ်၊ သူကသားမယူရင် အန်တီ စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပဲ လို့ပြောတော့ ကျနော်လက်ခံလိုက်တယ် ဒီနေ့သားစိတ်ကြိုက်ပြော အန်တီလုပ်ပေးမယ်တဲ့။
အဲဒါနဲ့ ကျနော်လဲ ” ဒါဆို သားလိုချင်တာ အန်တီကပေးမှာလား ” ” သားက ဘာလိုချင်လို့လဲ ” ” ကျနော်အန်တီ ဖင်ကိုလိုးချင်တယ် ” လို့ ပြောလိုက်တော့ သူစဉ်းစားသွားပြီး ပြီးတော့မှ ” သားလုပ်ချင်ရင်လုပ်လေ ဒါပေမယ့် ဖြေးဖြေးတော့ လုပ်ရမယ်နော် ” ကျနော်လဲ ဟုတ်ဆိုပြီး ” အန်တီမှာ အုန်းဆီရှိလား ” ” ရှိတယ် ” ဆိုပြီး အုန်းဆီယူပေးတယ်၊ ပြီးတော့အန်တီကကျနော့် လီးကို စုပ်ပေးတယ် ၊ ကျနော်လဲ ဒေါ်စံပယ့်ကို ပြောင်းပြန် ဖြစ်အောင်လုပ်ပီး 69 ပုံစံနဲ့ သူစောက်ဖုတ်ကို ယက်ပေး လိုက်တယ်၊ ပီးတော့ လက်ကို အုန်းဆီသုတ်ပီး သူ့ဖင်ထဲကို လက်တစ်ချောင်းထည့်ပြီး လိုးပေးနေတယ်၊ ခဏကြာတော့ လက်၂ချောင်းပူးထဲ့ကြည့်လိုက်တော့ မဝင်ဘူးတစ်နေတယ်၊ ကျနော်လဲ အန်တီရပီ လိုးကြမယ်ဆိုပြီး လေးဘက်ကုန်းခိုင်းပီး သူ့စအိုဝကို အုန်းဆီလောင်းထည့်၊ လီးကိုလဲ ရွှဲနေအောင်သုတ်ပြီး ဖင်ထဲကို လီးထိုးထည့်လိုက်တယ်
” အားနာတယ် မရဘူးထင်တယ်သားရယ်မလုပ်ပါနဲ့တော့ ပြန်ထုတ်လိုက်ပါနော် ” ကျနော်လဲ သူ့ဖင်ဝမှာ ကျနော့်လီးဒစ်ဝင်နေမှတော့ သူပြောတဲ့အသံကိုမကြားတော့ပဲ လီးဝင်အောင်သာ အားစိုက်လိုးနေမိတယ် ဖင်ကစီးပီးကြပ်နေတာပဲ၊ လိုးရတာ တော်တော်ကောင်တယ် ကျနော်လဲ လီးတဆုံးဝင်အောင်ထည့် ဆီထပ်လောင်းပြီး လိုးတာ အန်တီမှာတော့ နာလွန်းလို့ မျက်ရည်တွေဝဲခဲ့ရတယ် ကျနော်လဲ လီးအဝင်အထွက်ပုံမှန်လေးဖြစ်ရော၊ နောက်ကနေ အရှိန်နဲ့ ပစ်ဆောင့်ပြီးလိုးတော့တာပဲ ” ကောင်းလိုက်တာအန်တီရယ် ” ဆိုပြီး လက်တဖက်ကလဲ သူစောက်ဖုတ်ကိုနှိုက် အစိလေးကိုပွတ်ပေးနဲ့ လိုးလိုက်တာ သူလဲ အသံတွေညိမ်းပြီး ” အားအား ကောင်းတယ်သား လိုးလိုး နာနာလိုးပါ ” နဲ့အော်ပြီး ပြီးသွားတယ်။
ကျနော်လဲ စောင့်လိုးရင်း သူ့ဖင်ထဲမှာပဲ လီးရေတွေကို ပန်းထုတ်လိုက်တယ်၊ နောက်တော့ မွေးနေ့ကိတ် လှီး၊ တယောက်တယောက်အပြန်အလှန်ခွင့်ကျွေး ဝိုင်ခွက်တွေ သောက်ပြီး အဲညက ဖင်ရော စောက်ဖုတ်ရော ၂ချီစီလိုးဖြစ်တယ်၊ ကျနော်မွေးနေ့မှာ အရမ်းကို ပျော်ခဲ့ရတယ် ကျေးဇူးပါ အန်တီစံပယ်ရယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော့်ရဲ့အပျော်တွေက အဲဒီညက နောက်ဆုံးဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူး၊ နောက်ရက်မနက်အလုပ်သွားပြီး ညနေ အလုပ်ဆင်း အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှ ကျနော့် အခန်းဖော်က စာလေးတစောင်ပေးတယ်၊ စာထဲမှာတော့ … … သားရေ အန်တီကိုမေ့လိုက်ပါတော့ သားနဲ့အန်တီဘဝက ဘယ်လိုမှ ပေါင်းစပ်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွယ်၊ အန်တီလဲ သားတွေရှိတဲ့အမေရိကကို လိုက်သွားပါပြီ၊
သားကို ဖွင့်မပြော ရက်လို့ မပြောပြခဲ့တာ အန်တီကိုခွတ်လွှတ်ပါနော် ၊ သားနဲ့ တွေ့ခဲ့တဲ့ အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ အန်တီအရမ်းကို ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်၊ သားလည်း သင့်တော်တဲ့မိန်းခလေးရှာပြီး လက်ထပ်လိုက်ပါနော် ၊ သားကိုအရမ်းချစ်ပါတဲ့ အန်တီစံပယ် … ဒီစာလေးကိုဖတ်ပီးကျနော့်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ လှိုက်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီး ကျနော့် ပါပြင်မှာ မျက်ရည်တွေစီးကျနေပါတယ်၊ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိင်တြဲ့ ကျနော်တို့ဘဝကို ကျနော်နားလည်ပါတယ် အန်တီ တကယ်ဆိုရင် အန်တီကျနော်ကို နှုတ်ဆက်ခွင့်လေးတော့ ပေးသင့်တာပေါ့ အန်တီရယ်၊ အခါအခွင့်သင့်လို့ အန်တီ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာအုန်းမယ်ဆိုရင် မျှော်လင့်ခြင်းများစွာနဲ့ ဆီးကြိုနေမယ့် ကောင်လေးတယောက် ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့အန်တီရယ် မျက်ရည်စများဖြင့် …. ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဆန်ဒရှိတိုငျး